Ichane kangakanani imifanekiso kaGoogle Earth- iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/Iimpawu zeGoogle Earth ezichanekileyo
cadastreGoogle umhlaba / imephu
Umba Ukuchaneka imifanekiso yesatellite kunye orthorectified ye Google Earth ngumbuzo irekhodi iinjini zokuphendla kule mihla xanisa ngqo nonyamezelo kulula ukulahlekelwa GPS kwi elorini, bekuya kuba kuhle ukwenza isibini lokuvandlakanya ukulungeleka okanye kungekhona kokusebenzisa le datha umsebenzi omkhulu.
Kungekudala DigitalGlobe, umboneleli wemifanekiso Umhlaba ka-Google, bhengeze ukuba ngokukhawuleza baya kuba nezinto ezininzi emva kokuqaliswa kwe-satellites entsha yesisombululo esiphezulu kunye nomsebenzi ophezulu ngosuku.
Le sathelayithi ibizwa Worldview I, Yiyiphi iya kusebenza kunye yisathelayithi Quickbird, imifanekiso unesisombululo pixel iisentimitha 50 (1 okwangoku imitha) kwaye sifake iikhilomitha 600,000 square ngosuku, nto leyo ngoku ifunyenwe ngeveki.
Oku kudla ngokulahlekisa abo bajolise kuphela kwimveliso yokugqibela (iimephu) hayi kwiimveliso eziphakathi zovavanyo kunye nemvelaphi yabo yeefoto, yiyo loo nto esivumela kungekuphela ukuba neemveliso kodwa kunye nenqanaba labo lokuchaneka nokubaluleka. Xa usebenzisa imephu zikaGoogle kwiinjongo zendawo Ukuchaneka okuphantsi kunokudityaniswa, ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-30, kuba umfanekiso wesathelayithi ufuna uthungelwano lokuqala loku-odola kunye nokutshekishwa kwengingqi ukulungiswa. Ayisiyonto imbi, kukuba yenzelwe webhsayithi yiyiphi indlela iGoogle Earth ibiza ngayo uluhlu.
Kwabo bafuna ukwenza i-cadastre kunye ne-ortos ye-GoogleEarth, nantsi umzekelo wento eya kufumaneka:
Oku La Jaguita, Comayagua, Honduras; qaphela indlela ukuphindaphinda kwezakhiwo ezifanayo, izakhiwo ze-36.51 ukuya kumntla-ntshona-mpuma, kubonakala kwintlanganiso yomfanekiso.
Sisebenzisa ezimbini i-GPS Magelan Mobile Mapper, enye njengesiseko, enye inokuphakamisa amanqaku kwaye senze ukulungiswa kokuhlukana, siyiqhathanise ne-orthophoto eyenziwe ngeefoto zentambo kwiminyaka emithathu edluleyo kunye ne-5,000 indiza; Idatha yeGPS ihambelana ngokupheleleyo kunye ne-orthophoto kodwa ingabi nayo nayiphi na imifanekiso yeGoogle Earth, enye yazo i-23 metron northeast, enye i-19 mitha, kodwa i-vector vlacement inekona ehlukileyo.
Ngokuphathelene noku, akunakwenzeka ukuba sibuze inkqubo, eyeyona ilungileyo uninzi lwabantu bethu olunokuba nayo apho ulwazi lwecartographic lungazukufika kule minyaka ili-10 izayo kwaye ukuyikhetha simahla; into ebalulekileyo kukuba siyazi ukubaluleka kwayo kunye nokusikelwa umda.
Ukucamngca ndikushiya eli nqaku lemigaqo kaGoogle Earth, leyo ekungekho mntu uyifundileyo kwaye ucinezele iqhosha elithi "Ndiyavuma":
e) HAYI iingcebiso okanye ulwazi, enoba zithethiwe okanye zibhaliwe, efunyenwe GOOGLE OKANYE NAYIPHI wesithathu okanye nge-softwe Uze wenze naluphi iwaranti NOT ngokucacileyo yabekwa ngala IMIGAQO NEMIQATHANGO.
I-Google Maps idibanisa amabalazwe kumazwe aseSpain
Iincwadi zeGoogle zeemephu ezipheleleyo
Ndiyathemba ukuba amava aya kuba luncedo kumntu: Ndivavanye iihektare ezili-14 nge-gpsmap 64sx, kunye ne-eriyali, ngeli xesha ulungelelwaniso lwalujikeleze i-1.5 yeemitha zokuchaneka kwiplanimetry (engakhuthazwayo kwi-altimetry), ukuba nedatha echanekileyo endiyilinganiseleyo. imida (hayi yonke into ngenxa yokuba kwakukho amacandelo asemgxobhozweni) kwaye udibanise iindawo ezichasene nemilinganiselo kunye nokulungelelanisa ulungelelwaniso kwi-ch. ngoko ke imida yempazamo icuthelwe ukuya kwiisentimitha, andinakuyichaza inkqubo ngokweenkcukacha njengoko inokuba yindinisa, ndiyathemba ukuba iyakunceda.
Qaphela: uhlobo lwesilawuli seGPS kwipografi isetyenziselwa ukuba nolungelelwaniso malunga.
I-RTk gps zizixhobo ezikhethekileyo, ezinomda wempazamo wemilimitha.
EBAYAN QUNTERO uthi:
Ndithi kuni bantu osebenza nabo, umhlaba kagoogle unempazamo eninzi nangaphezulu, bendiphakamisa kunye nesikhululo kunye nomda wempazamo kule ndawo iphantse yangama-8 eemitha kwiprojekthi apho imitha enye ingangaphezulu Umsele wamanzi oza kusilela kwindawo ethe tyaba, nceda uphumle ukuze ubone zonke ezi zimvo enkosi.
Asoze akufane nawe. Imodeli yokuphakama komhlaba kaGoogle ilula kakhulu njengoko ilungiselelwe iinjongo zehlabathi jikelele; engenzekiyo xa usenza uphando lwendawo eneendawo ezingaphezulu zokulawula ukuphakama.
Ndisandula ukwenza uphando ngobume bendawo ngenkqubo yamanzi okusela eArequipa kwaye amanqanaba endiwafumeneyo kunye neTotal Station awahambelani kwaphela kunye namanqanaba okanye imigca ye-google yomhlaba.Kukho umahluko weemitha ezingama-40 kubude.
UNicolas Cuyun uthi:
Kuyimfuneko ukuchaza abaninzi bedidekile sub-metric kunye omkhulu GPS (Garmin, Magellan, njl) Akuthandabuzeki ukuba zikhona Sub-metrical ngqo cadastre of 5 cm (leyo amakhulu) ukuya iibrawuza ube umahluko 3- 5-10 iimitha.
Imifanekiso yeGoogle ifanele ithathwe njengento yokubhekisa, kodwa kungekhona njengesiseko sokusebenza ngokuchaneka kwee-metric; kuba kwaye kude kube yinto eqinisekisileyo, ukutshintsha kuya kuqhubeka kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezisebenzisayo.
E-Mexico impazamo isuka kwi-5 ukuya kwi-7 yeemitha, sele ndiqhube iimvavanyo ezininzi nge-2 GPS. Nangona kunjalo, xa usebenzisa umsebenzi we "Geolocation" kwi-Autocad, le mpazamo iyancipha ngokuthathela ingqalelo kuphela impazamo ye-GPS, ngokweemvavanyo endizenzileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Kuyinyaniso uphando olwenziwe kwisikhululo samashishini alufanelanga nantoni na ngemifanekiso yeGoogle,
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba yeyiphi le sam usebenza kuyo, ngokubanzi usebenza ku-sam 84 yeyiphi esetyenziswa kwilizwe liphela, kuba oko kwenza umahluko wenqaku elinye.
Zivela kwi-7 ukuya kwi-10 yeemitha ze-app, ndingakuxelela ngokusekwe emsebenzini wam kuba ndisebenzisa i-GPS kunye neetshathi zomkhosi kakhulu kwaye apho ibonisa umohluko.
Ja C. uMbhaptizi uthi:
Namhlanje ndifumene ngongxaki efanayo kwaye ndandifuna ukuchaneka ngokugqithiseleyo kwingxelo yenkcazelo, kwaye umahluko phakathi kwedatha lukhulu kakhulu owenza ukuba ndikhwankqise kakhulu. umlinganiselo ophakathi kunye ne-google ingaphezu kwe-5 km kwaye ephazamisayo
Ungasebenzisi i-DATA echanekileyo
UDavid Gaitán Fuentes uthi:
I-Datum yokulungelelanisa i-UTM esetyenziswa nguGoogle Earth yiWGS84, kwaye umahluko ubangelwe kukuba iGPS oyisebenzisileyo iqulunqwe kwiDatum NAD 27. Qwalasela iGPS yakho, ndiyacebisa. Imibuliso evela eManagua, eNicaragua.
Ewe ayisiyonto ingako yokuthetha ngokuchanekileyo. Ayiyomilinganiselo yeepasile, ngaphandle kokuba ukusetyenziswa kwemali kuphela okanye akunxibelelanisi into esemthethweni.
Sawubona, izivakalisi ezinomdla kakhulu. Siyaxabisa i-Google Earth yamahhala, nangona ndicinga ukuba xa umntu efuna into echanekileyo, ngaphandle kokutshala imali eninzi, ndingasebenzisa i-GPS, enika ukuchaneka kweemitha ezintathu okanye ngaphantsi. Nceda undixelele ukuba ukuthetha kwam kunene, kuba ndihlala ndifuna ukuchaneka ekufumaneni amaphuzu. Ngaphambili, siyabonga.
Xa ndiqalise ukusebenzisa i-Google Earth kunye ne-GPS ndineengxaki efanayo, isisombululo kukuba zombini kufuneka abe kwinkqubo efanayo.
Ngenxa yoko kuya kuba nzima kuwe ukusebenzisa umfanekiso kaGoogle. Ewe, kuxhomekeka kwilizwe nakwindawo okuyo, iihambo zahlukile.
Mhlawumbi enye indlela ukukhuphela umzobo ngePlex.Earth, kwaye uthatha amanqaku okulawula ukuba ngaphantsi okanye ngaphantsi ulungise kwiinkcukacha ezifanelekileyo.
Ndizinikezele ekuhambeni ngeemoto ezi-4 × 4 kwaye sihlala sisebenzisa i-Garmin gps, bendifuna ukuyixuba kunye nolungelelwaniso lukaGoogle kwaye ndinomahluko ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-200 phakathi komfanekiso kunye nenqaku ngqo ukuze oko kundichaphazele kakhulu ukufumana izithuba kwaye ngokuqinisekileyo indlela yendlela, ndingayenza njani le sikwere okanye zeziphi iinkqubo endizisebenzisayo kunye neefoto zesathelayithi ukuze ndibenomahluko omncinci? Ndifuna ukuphatha ngedatha, iifoto kunye nokulungelelanisa ngexesha lokwenyani.
Ewe, le nxu lumene ngento ethile
Everardo Munguia uthi:
Ngaba kukho umntu owaziyo ukuba kukho ukuphuculwa kwezi nguqulelo?
Okokuqala kukubonga ngempendulo, ndiyityhilele enye inkcazelo enokuyifaka kwiimpapasho zakho ezihlukeneyo malunga ne-cadastre, ndicinga ukuba kuya kuba nzima ukusetyenziswa kweGoogle Maps ekusebenziseni i-cadastre, ngoko ndifuna ezinye izisombululo, ukuba umntu apha uyazi ezinye iindlela eza kuba ndiza kubulela njengoko ndikhangele isisombululo sokulungisa ingxaki ehamba kunye ne-cadastre.
Oko kuxhomekeke kubume bendawo. Umzekelo, e-United States nakwamanye amazwe ase Yuropu, umfanekiso owubonayo kuGoogle Earth ubonelelwe ngoorhulumente okanye ngoorhulumente. Ke ngoko ukuchaneka kulungile kakhulu.
Kodwa kwamanye amazwe, ukuchaneka kuphakathi kwe-10 ukuya kwi-30 yeemitha yokufuduswa kwemifanekiso. Oku kungangqinwa kwi-splices phakathi kokudutyulwa kweminyaka eyahlukeneyo.
Akukho ncwadana ehlawulwayo ekunika imifanekiso engcono.
Sawubona, usuku olungileyo
Ndinomdla wokusebenzisa iimephu zikaGoogle, kwiiprojekthi ezahlukeneyo ezinokulindelwa okwahlukileyo, ke ndinomdla wokwazi ukuba ichaneke kangakanani na okanye ithini inqanaba lesiphoso sayo; Ndiyazibuza nokuba kukho ingxelo ehlawulelweyo echanekileyo ngakumbi okanye ngokulula apho ndingafumanisa malunga noku.
Ndiyabonga kakhulu, ndiyayixabisa loo mpapasho.
Molo, ngokoluvo lwam andicingi ukuba ulungelelwaniso lwe-geocentric (k) kufuneka lulungiswe, njengoko bendifunda apho, kodwa endaweni yoko ..., ukufuduswa ngenxa yesiqabu esiveliswa sisiphumo separallax.
Khuphela kwi-Stitchmaps njenge-jpg kwindawo yokuphakama kwelanga akukho mkhulu kune-500 mts, kunye nefayili yayo yokulinganisela uze uyilayishe kwi-Ilwis.
Ukuba i-Ilwis ayifuni ukuyifumana ifayili yokulinganisa uya kufuna iimpawu zokulawula ekufuneka uyiqwalasele.
URoberto Peralta uthi:
Ndingadlulisela njani umfanekiso we-goart ye-goart kwinkqubo ye-3.2 engenangqungquthela kwaye endikunika ingqwalasela elungileyo ukuya kudibanisa.
Inqaku lihle kakhulu, kulo mba ... into yokuba ayichanekanga ayenzi ukuba ibe mbi kwaye njengoko besithi yiyona ndawo kuphela apho basinika khona imifanekiso "yamahhala" yeso sigqibo esiphezulu. Ndisebenzise ezinye kwaye ndiye ndakwazi ukuqinisekisa ukuba impazamo iyanda kwiindawo zeentaba okanye nge-topography engalinganiyo, kodwa kwiindawo ezithe tyaba impazamo xa kuthelekiswa nedatha ye-GPS ye-navigator ayizange ifaneleke kakhulu ... ngokusengqiqweni kuxhomekeke kakhulu kwinjongo. yokusetyenziswa, ndicinga ukuba "indawo" yokuzoba sisixhobo esihle kakhulu egcina ixesha elininzi kunye nomzamo ... uhlala ukhusela inkxaso ngeendawo ezininzi zokulawula umhlaba ukuze zilungiswe.
UJoseph Ramirez uthi:
Njengokuba i-imeyile yam isitsho, enye into ubume bendawo ethe tyaba kwaye enye bubume bomhlaba obuvela emajukujukwini (obungabikhoyo ...) kodwa i-photogrammetry evela emajukujukwini kufuneka ilungise indawo ehambelana nokuma komhlaba ngokujonga kugoso lomhlaba, ubone umahluko YOMHLABA… ukongeza kuloo nto, umda wempazamo yelensi owawuthathwe kuyo umfanekiso emajukujukwini, zonke iilensi azikho tyaba nge-100% zigobile, ngoko ke ilensi yamehlo entlanzi, 50 mm 200 mm okanye usondeze Le ngcaciso kulapho kuvela khona impazamo kumfanekiso ongentla kwaye nabani na ozama ukwenza i-cadastre ngeGoogle ukhohlisa umnini okanye urhulumente
Ingxaki kukuba isigaba sokutshintsha asifani, asihambisi nje umgama othile kuba ulungisiwe kwindawo enye kwaye ubola kwelinye. Ndizisebenzisile, ndizikhuphele ngestitchmaps, emva koko ndizilungise ngamanqaku olawulo ngakumbi ndisebenzisa iMicrostation Descartes ... kwaye oku kuyayiphucula kakhulu ...
I-Google iceba ukudibanisa imifanekiso ye-geoeye… kodwa ukuza kuthi ga ngoku, imifanekiso yesathelayithi ayinayo i-georeference elungileyo ngaphandle kokuba i-warp ngeendawo ezaneleyo zolawulo lwasekhaya.
Andiyazi ngomnye umncedisi onobulunga obubhetele (nge-google), ewe kukho iinkonzo ze-OGC ezivela kwamanye amazwe azinikezela ngezinto zabo ngokweenkonzo zeemephu zewebhu.
Endaweni yokungabinanto, ayonto imbi. Kwii-cadastres ezinendlela yezemali, usetyenziso lomhlaba…. ilungile kodwa ayenzelwanga i-cadastre ngendlela esemthethweni, eya kuthi ibandakanye nesihloko somhlaba…. kunganzima ukunika ipropathi umntu, kwaye oku ziimitha ezingama-30 kwisihloko sommelwane
UMic Ing. UJuan Josè Jimènez Varela uthi:
NDIBINGELELE KOKUQALA UKUBULISA YINTONI INGCACISO ONAYO NGEPROJEKTHI ENTSHA YOGOGO ... SEBENZISA IifOTOGRAFI EZISUKA KUMHLABA WEGOOGLE NENDLELA ONGAYENZIZA NGAYO IZIMVO ZINESIQINISEKISO SEEMITHA EZIMBALWA EZINOKUQINISEKISWA UKUZE ZIMELE IZINTO ENDIZOZIFUNA KODWA NDIYA KUTHANDA UKWAZI UKUBA KUKHO NANYE ISETA ESINOMGANGATHO OBALASELEYO
NGOKUQINISELWA, IMIQEPHO YAMANQAKU E-GOOGLE AWAKHONA?
YINTONI YOKUTHUTHUKISWA KUNYE
UQEQESHO LWEGIS IJOL
Ewe, sele sele bekhona boniswe ezinye iimifanekiso nge pixel ye-41 cm.
Ndiyazibuza ukuba ingaba isathelayithi entsha iza kusebenza ngoku?
Ndiyakuvuyisana nawe, ngenxa yezimvo zakho, uhlala unomdla.
Isebenza njani iRhafu yePropathi kumazwe angama-27 ehlabathi